Ubuntu Budgie 19.10 ngoku iyafumaneka. Ezi ziindaba zakho | Ubunlog
Ubuntu Budgie 19.10 ngoku iyafumaneka. Ezi ziindaba zakho
Ngaba ukhe weva ukuba namhlanje Usungule Inguqulelo entsha yosapho Ubuntu? Ngokuqinisekileyo ewe. Njengoko sele uyazi okanye kufanele ukuba uyazi, usapho lwe-Ubuntu luqukethe iinkqubo ezininzi zokusebenza, ezi-8 zichanekile. Phakathi kwezo 8 sinento yazo zonke izinto esizithandayo, ezinje ngohlobo oluphambili (Ubuntu), i-KDE, ukukhanya kunye nokulinganiselwa ngakumbi (uLubuntu) okanye nohlobo lwentengiso yaseTshayina. Kodwa yintoni enomdla kweli nqaku yile Ubuntu Budgie 19.10, ngo-Okthobha u-2019 ukukhutshwa kwencasa yamva nje yokufika kusapho lwe-Ubuntu.
Yimizuzwana embalwa edlulileyo xa babhengeze ukumiliselwa kwabo. Ngokungafaniyo no-Ubuntu Studio, eyayibhengezileyo kodwa iwebhusayithi yayo ayihlaziywa (ihlaziywa njengoko bendichwetheza) Ubuntu Budgie uhlaziye iphepha lakhe lewebhu kwimizuzu emva kokuba umfanekiso we-ISO ufumaneke kwiseva ye-Ubuntu FTP. Ngomfanekiso okhoyo, iphepha lewebhu elihlaziyiweyo kunye nesibhengezo esenziweyo, Ubuntu Budgie 19.10 Eoan Ermine release is now 100% esemthethweni.
Amagqabantshintshi Ubuntu Budgie 19.10
Ixhaswe iinyanga ezili-9, de kube nguJulayi 2020.
Inguqulelo yamva nje yedesktop yeBudgie (10.5) kwisitaki seGNOME 3.34.
Iinguqulelo zamvanje zeapplet zeBudgie.
Abaqhubi be-NVIDIA bafakwe ngokuzenzekelayo kwi-ISO.
Inkxaso yokuqala yeZFS njengengcambu.
INemo ihlaziyiwe kuhlobo lwe-v4.
Amandla okwenza okanye ukukhubaza ii-icon ze-desktop kukhetho lwe-desktop kaBudgie.
Izinketho ezintsha zokufikelela, ikhibhodi yedesktop kunye neglasi yokukhulisa.
Njengoko sifunda inqaku lokukhupha, inguqulelo ye-Eoan Ermine ka-Ubuntu Budgie yenziwe ngokusekwe kwizimvo kunye nengxelo Abasebenzisi babathumele malunga neenguqulelo u-18.04, 18.10 no-19.04. Eli linyathelo elibalulekileyo eliza kwiinyanga ezintandathu ngaphambi kwento eza kuba Ubuntu Budgie 20.04 LTS Focal Fossa. Ukuba injenge-v18.04, iyakuxhaswa iminyaka emithathu, kude kube ngu-2023.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » Ezinye iidesika » Ubuntu Budgie 19.10 ngoku iyafumaneka. Ezi ziindaba zakho
ICloudflare ibonelela ngemodyuli yokuxhasa i-HTTP / 3 kwi-NGINX